किन निर्माता करण जौहरको सपना पूरा हुन सकेन ? कारण यस्तो छ - Everest Dainik - News from Nepal
किन निर्माता करण जौहरको सपना पूरा हुन सकेन ? कारण यस्तो छ
मुम्बई, फागुन २४ । बलिउड क्षेत्रका चलचित्र निर्माता करण जोहरद्वारा निर्मित मल्टिस्टार बलिउड चलचित्र ‘कलंक’ का मूख्य कलाकारहरुको लुक्स सार्वजनिक हुने भएको छ ।
बिहीवार बलिउड चलचित्रका मेल एक्टर्सको फर्स्ट लुक रिलिज गरिएको छ ।
बलिउड चलचित्र ‘कलंक’, करणको दिलसँग निकै नजिक छ । आलिया भट्ट, वरुण धवन, सञ्जय दत्त, आदित्य रोय कपूर, माधुरी दीक्षित र सोनाक्षी सिन्हा यस चलचित्रमा मूख्य भूमिकामना देखिने भएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस चलचित्र ‘किक २’ मा सलमानकी हिरोइन ज्याकलिन नै पक्कापक्की
तर, यसअघि करण आफ्नो ड्रिम प्रोजेक्टका लागि अर्कै स्टारकास्ट लिने सोचमा थिए । उनले फिल्ममा शाहरुख खान, रानी मुखर्जी, काजोल र अजय देवगनलाई कास्ट गर्न चाहेका थिए । तर, केही कारणले उनले आफ्नो ड्रिम कास्ट वास्तविकतामा बदल्न सकेनन् । उनले यसमा शाहरुख र रणबीर कपूरलाई पनि लिन चाहेका थिए । यसमा पनि उनी सफल भएनन् ।
याे पनि पढ्नुस अक्षयकुमार हिरोइनसँग हारेपछि मुख फोरेरै फर्काए यस्तो जवाफ
यतिमात्र होइन, स्वर्गीय अभिनेत्री श्रीदेवी पनि ‘कलंक’ को हिस्सा थिइन् । तर, गएको वर्ष आकस्मिक मृत्युका कारण उनको ठाउँमा माधुरी दीक्षित नेनेलाई करणले अनुबन्ध गरेका हुन् । कयौं वर्षपछि सञ्जय दत्त र माधुरीलाई दर्शकले एकसाथ पर्दामा देख्न पाउँदैछन् । तर, फिल्ममा उनीहरुको साथमा कुनै सिन छ वा छैन त्यो भने खुलेको छैन ।
याे पनि पढ्नुस कैटरिना कैफले स्ट्याटस पोष्ट गर्दै शशी कपुरलार्इ श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिन्
पिरियड ड्रामा फिल्म कलंकमा वरुण धवन जफरको रोलमा देखिनेछन् । यो फिल्म १९ अप्रिलमा रिलिज हुँदैछ । यसको बजेट ८० करोड बताइएको छ । ‘कलंक’ लार्ई अभिषेक वर्मनले निर्देशन गरेका हुन् । यसलाई करण जोहर, साजिद नाडियडवाला, हिरू यश जोहर र अपूर्व मेहताले संयूक्त रुपमा निर्माण गरेका हुन् । एजेन्सी